कांग्रेसले देश बेचेकै हो :- ज्ञानेन्द्र शाही ! – Nepal Online Khabar
कांग्रेसले देश बेचेकै हो :- ज्ञानेन्द्र शाही !
चैत्र १, २०७८ मंगलबार 469
काठमाडौं : राप्रपाका प्रवत्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली कांग्रेसको नाम अब मग’न्ते कांग्रेस राख्न सुझाब दिएका छन् । राप्रपाले बर्दियामा आयोजना गरेको बिशाल सभामा बोल्दै शाहीले कांग्रेसलाई मग’न्तेको संज्ञा दिएका हुन् ।
शाहीले कांग्रेस यो मुलुकको मगन्ते पार्टी रहेको र उसले अलिकति पैसाको लोभमा परेर बताएका हुन् । एमसीसी सम्झौता पास कांग्रेस र यसका नेताहरुले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस प्रति आक्रा’मक भएका हुन् ।
एमसीसी पास हुने बेला कांग्रेसका माहामन्त्री गगन थापाले बोलेको अभिव्यक्तिलाई व्यं’ग्य गर्दै शाहीले भने,“गगन थापा ज्यु, अब चुनाबमा भोट मा’ग्न जाँदा भन्नुस,हामीलाई सत्तामा पुर्याउनुस, चाइना संग ७० अर्ब, अमेरिकासंग ६० अर्ब र भारत संग ८० अर्ब मा’ग्छौं र यो मुलुक बे’च्छौं ।“
चुनावी ‘भाषण’ बन्दै एमसीसी सरकारले संसद्बाट पारित गराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) राजनीतिक दल हरुका लागि चुनावी ‘भाषण’को थप नयाँ विषय बन्दै गएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको एमसीसीलाई सत्तारूढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्मका नेताहरूले चुनावी भाषणको विषय बनाउन थालेका छन् ।
एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरू लामो समयसम्म विभाजित बनेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेले एमसीसीमा मौन समर्थन गरेको थियो । यतिबेला भने दलका नेताहरू सोही विषयमा जनताबीच चुनावी कार्यक्रममा गएर र सामाजिक सञ्जालमार्फत फेरि बोल्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन केन्द्रित विशेष अभियान सञ्चालनका क्रममा छ । कांग्रेसले २९ फागुनबाट २९ चैतसम्म एकमहिने चुनावी अभियान नै घोषणा गरेर गाउँ पसिसकेको छ । उसले एमसीसीका विषयमा जनताबीच छरिएका भ्र’मलाई अभियानमार्फत नै चि’र्ने नीति लिएको छ ।
सोही क्रममा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार नुवाकोटमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर बोलेका छन् । -राजधानी दैनिकबाट ।
Prevमहिला वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ :- राष्ट्रपति भण्डारी !
Nextनयाँ शैक्षिक सत्र जेठ १ बाट सुरु हुने !
यी महिना जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् करोडपति , कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धनि ? जान्नु-होस् !